Habro Uu Horkacayo Sarkaalka Maamulka Lacagta Ee Sirdoonka Oo xilka Ka Qaaday Maayarkii Xiis - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Habro Uu Horkacayo Sarkaalka Maamulka Lacagta Ee Sirdoonka Oo xilka Ka Qaaday Maayarkii Xiis
xilka ka qaaday oo ah sarkaalka maamulka iyo lacagta ee ciidanka sirdoonka qaranka Maxamed Cali Shabeel iyo habro uu hor kacayo taasna Waa Lama Arag.
Sarkaalkan oo siduu noo sheegay ay habrowadaag dhow yihiin Madaxtooyada kamuu mid ahayn dadki u olaleeyey ama u codeeyey xukumadda Silaanyo kamu mid ahayn ragii u soo halgamay xornimada dalka maha nin aqoon u leh xilka loo igmaday, nasiibkiisa nimcatul fashuuqa ku simay.
Hadaba sida ay noo cadeyeen Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Badhasaabka Sanaag Falay ayaa noo sheegay in Marwada Madaxweynuhu ku amartay inay xilka qaadan maamulki hore Degmada Xiis magacaabana maamul cusub taasoo lagu qancinayo codsi ka yimi habro ay marwada saaxiib yihiin.
Dhaxaan maqli jiray marwadu dawlad u gaar ah bay odayga garab wada taasina maantay noo cadatay.
Hadaba gunti iyo gebogebadii waxan Marwada odhan laha hadii lagu khalday oo ilduf kugu dhacay ka noqo khaladka oo sax, hadday been abuur tahayna waa inaad cadaysa, hadday kas iyo ula kac kuday ah kaa tahay waxan ku leenahay kuu suuroobimayso GEELOW GEED WALBA DAAQDEE MAALINTAAD CIIN DAAQDAA LAGUU YAABA.